Ungayifumana njani i-visa yaseTurkey kubemi basePakistan? - ALinks
Abantu basePakistan bafuna i-visa ukuze bangene eTurkey. Kuya kufuneka ufake isicelo sevisa kwindlu yozakuzo yakho ekufutshane. Ungaqala isicelo sakho kwifayile ye- iphepha langaphambi kokufaka isicelo kunye nokuqeshwa zeNkqubo zeRiphabhlikhi yaseTurkey. Ukuba une-visa yeSchengen okanye i-USA, i-UK okanye i-visa yase-Ireland unokufaka isicelo sokungena kwi-e-Visa esingangenyanga iphepha le-Visa.
Ukuba unamagosa aseburhulumenteni (oonozakuzaku, inkonzo okanye okhethekileyo) wepasipoti yasePakistan, awudingi visa yokuhamba kwakho eTurkey kangangeentsuku ezingama-90.
Ulufumana njani uncedo ngesicelo sakho sevisa?
Unokufaka isicelo se-visa yaseTurkey ngokwakho kodwa ukuba ufuna uncedo ngesicelo sakho se-visa ungahamba ngenkonzo ethembekileyo ye-visa, IVisaHQ or iVisa. Kuxhomekeke kubuzwe bakho kunye nexesha onalo, enye inkonzo inokulunge ngakumbi kunenye.
Faka isicelo seVisa yaseTurkey ngeVisaHQ
Faka isicelo seVisa yaseTurkey ngeVisa
I-Turkey yindawo ethandwa kakhulu ngabahambi base Pakistani. Kungenxa yenkcubeko yayo entle enemibala. Oko kutsala abakhenkethi abavela kwihlabathi liphela. I-Turkey lilizwe lamaSilamsi ke, ufumana yonke iHalal apho. AmaPakistan ayathanda ukutyelela ilizwe lamaSilamsi njengoko lamkela wonke umntu.
Indlela yevisa ilula. Ungathumela isicelo se-e-visa kwi-intanethi kuyo nayiphi na iarhente efanelekileyo yokuhamba kwaye uqhubekise i-visa yakho. Kodwa, ukhetho lwe-E-Visa luyacetyiswa kuba longa ixesha kunye nemali.
Xa undwendwela iTurkey ngo-2020 kwaye ufuna ukwazi malunga neemfuno zevisa. Kwaye emva koko inkqubo yokwenza isicelo. Intlawulo yevisa yaseTurkey, amaxwebhu, kunye nexesha lokuqhubekeka yeyona ndawo ichanekileyo. Apha ngezantsi kukho wonke umsebenzi.
The I-eVisa iyafumaneka kwi-intanethi ngeTurkey eVisa. I-visa iya kuthi ke ithunyelwe kwidilesi ye-imeyile yomenzi-sicelo. Ishicilelwe ilungele ukuboniswa kwindawo yokungena eTurkey ukuba yamkelwe. Ufumana iphepha elinye lokungena, elikuvumela ukuba uhlale eTurkey ngaphandle kweentsuku ezingama-30 ngokwamkelwa okupheleleyo.
Yintoni iVisa Elektroniki?
I-visa ye-elektroniki luxwebhu olusemthethweni oluvumela ukufikelela eTurkey kunye nokuhamba. I-Visa ye-e yenye yeendlela zaseTurkey kunye namazibuko okungena.
Emva kokuba ufake iinkcukacha eziyimfuneko kunye neentlawulo usebenzisa ikhadi lekhredithi okanye ledebhithi. Ingaba yi-MasterCard, iVisa, okanye i-UnionPay. Abafaki zicelo bafumana ii-visa zabo ngombane.
Kwinyathelo lokugqibela, uxelelwa ukuba isicelo sakho sigqityiwe. Nceda ubone ikhonkco ukuze ukhuphele i-E-Visa yakho. Ngapha koko, unxibelelwano olufanayo luya kuthunyelwa kuwe ukukhuphela i-Visa yakho. Ungajonga i-Visa yakho kwinkqubo kunye namagosa olawulo lokundwendwela kumazibuko okungena. Kodwa kuyacetyiswa ukuba ugcine i-Visa yakho kwikhompyuter yakho. Nokuba ikopi ethambileyo okanye ikopi enzima ukuba isixhobo siyasilela.
Njengakwezinye iivisa, amagosa aseTurkey aligcinile ilungelo. Kwindawo zokungena, ukwala ukungena kwe-e-visa eTurkey ngaphandle kwesizathu.
Zithini izibonelelo ze-e-Visa?
I-E-Visa inokufikeleleka naphi na kwiwebhu. Kwakhona igcina ixesha lokufaka isicelo se-visa yemishini yaseTurkey okanye izibuko lokufikelela eTurkey (ukuba uyafaneleka).
Yintoni endiyifunayo kwi-ONLINE EVISA TURKEY?
Uyavuya ukwazi ukuba awunyanzelekanga ukuba ufake isicelo se-eVisa yeTurkey kwi-Intanethi. Kwindlela yokwenza isicelo, kufuneka ube noku kulandelayo:
Ipasipoti-Bonke abafaki zicelo kufuneka babe noxwebhu lokuhamba. Ngapha koko, uxwebhu lokuhamba kufuneka luhlale lusebenza kangangeenyanga ezintandathu. Kufuneka okungenani kubekho amaphepha amabini angenanto.
Umfanekiso-kuya kufuneka uqiniseke ukuba uthatha ifoto ngokukhawuleza. Inokuba yindawo emhlophe yangasemva. Ukuba i-visa inikwa xa umenzi-sicelo efika kwelo lizwe. Kuya kufuneka abeneefoto ezimbini ezilingana nepasipoti-ubukhulu eziqhotyoshelwe kolu xwebhu.
Indlela yokuhlawula ingaba yikhadi lekhredithi okanye i-akhawunti ye-PayPal. Intlawulo ichaza.
IVisa okanye iphepha-mvume lokuhlala uskene iikopi zeSchengen, e-USA, e-UK.
Ifom yesicelo igcwaliswe kwi-intanethi.
Kungenzeka njani ukuba mayenziwe ngesicelo sam?
Imalunga nayo. Inkonzo yethu ekwi-Intanethi ikunika iindlela ezintathu zokulungisa. Ke unokukhetha eyona isebenza ngcono kuwe. Unokukhetha apha: Nantsi
Ukulungiswa kwe-visa yesiqhelo-kwiiyure ezingama-24, kufika iTurkey yakho.
Ukulungiswa ngokungxamisekileyo-isicelo sakho senziwa ngaphakathi kweeyure ezi-4.
Kuqhubekeka uxwebhu lweSuper Rush-kwimizuzu engama-30 uxwebhu lwakho lokuhamba selulungile.
I-eVisa yakho yaseTurkey ibalwe ngesixa semali osichithe kulungiswa. Oku kulandelayo:
Iqhubekekisa into eqhelekileyo - i-USD 86.50
Ukuqhubekeka kokukhawuleza-i-USD 106.50
Ukuqhubekeka kweSuper Rush- i-USD 126.50
Ngaba unazo naziphi na iinkcukacha ezongeziweyo malunga ne-EVISA TURKEY?
Abantu basePakistan kuya kufuneka babonise ukuba banamaphepha onke asemthethweni emdeni. Zonke iinkcukacha zomfaki sicelo zifakwe ngokufihliweyo kwaye zisetyenziselwa inkqubo yevisa kuphela.
Ukuba ne-visa kweTurkey akuniki ukungena kweli lizwe. Kwinqanaba lokungena, igosa lokufuduka linokwala nakuphi na ukungena komntu. Ukuba uyakholelwa ukuba iimfuno zokungena kwelinye ilizwe azifumananga ukhuseleko lwesizwe. Izandiso kwi-visa kufuneka zithunyelwe kwiSebe laseTurkey loFuduko. Kungenxa yamaxwebhu ayimfuneko kunye nenkcazo ye- khulisat.
Yintoni isiQinisekiso sexesha elide i-EVISA TURKEY?
I-eVisa iyasebenza kwiintsuku ezili-180 emva kokufika eTurkey. Ukuhlala okukhulu kakhulu ziintsuku ezingama-30, xa zizonke, ngokungena. I-visa eyodwa yokungena.
Ufumana njani umsebenzi eAzerbaijan?
Uyifumana njani i-visa yokuya e-Iraq?
INDLELA YOKUFUMANA I-VISA YENKQUBO?
Bali Visa, Zithini izinto onokukhetha kuzo amaIndiya ahambela iIndonesia?
Uyifumana njani iVisa yaseKenya?
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eNorway? Isikhokelo esikhawulezayo sabasemzini kunye namaNorwegi
Ufunda njani eUganda?
Afghanistani (13) uncedo (10) Alibhaniya (9) Ostreliya (18) Ostriya (14) iibhanki (37) Khanada (24) iTshayina (17) Dominikha (12) Fransi (16) Jemani (17) yibakhona (28) impilo (29) Hong Kong (12) iihotele (29) izindlu (14) Indiya (87) Irakh (15) ElamaTaliyane (24) imisebenzi (125) Maleyishiya (12) Mekhsikho (27) imali (70) Nayijeriya (12) Norowe (13) Phakistan (13) ababaleki (55) Rhashiya (16) ISaudi Arabia (9) isikolo (23) Speyin (19) isifundo (36) Swizalend (10) Thayilendi (13) izinto ukuthenga (106) izinto zokwenza (52) hamba (239) ikarikuni (29) UAE (14) Uganda (9) UK (59) i-USA (38) amakhonkco aluncedo (23) Venezuela (13) ivisa (152)